Ilaalada Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Axmed Karaash Oo Lagu Rasaaseeyay Badhtamaha Garoowe - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Ilaalada Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Axmed Karaash Oo Lagu Rasaaseeyay Badhtamaha Garoowe
Garoowe(ANN)-Ciidanka Ilaalada khaaska ah ee Madaxweyne ku xigeenka Maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland, Axmed Karaash, ayaa lagu weerraray tacshiirado rasaas ah, kuwaas oo ay iksu dhaceen Ciidanka loo xilsaaray bandawda lagu soo rogay Magaalada.
Wararka qaar, ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu ku dhintay goobta, isla markaana tiro kale dhaawacyo kasoo gaadheen.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhacdadaa, waxayna sheegeen badhtamaha magaalada Garowe ay isku rasaaseeyeen labada ciidan oo mid ahaa Ilaalada Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash iyo ciidanka loo xilsaaray bandawda magaalada.
Taliyaha Booliska ee magaalada Garoowe, ayaa sidoo kale dhankiisa warbaahinta u xaqiijiyay isku dhaca labada ciidan, wuxuuna qiray inuu jiro khasaare ka dhashay markii ay tacshiirado rasaas ah is dhaafsadeen ciidamada loo xilsaaray Banadowda magaalada saaran iyo ilaalada Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash.
Askariga dhintay, ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa Ilaalada Madaxweyne ku xigeenka, iyadoo ay jiraan dhaawacyo soo gaadhay askar kale oo aan tiradooda la xaqiijin.
Maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland, ayaa bandaw kusoo rogay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaa iyo magaalooyinka kale, taas oo looga jeedo sidii loo xakayn lahaa caabuqa COVID-19, kaas oo gobolada kale ee Soomaaliya lagu arkay kiisas gaadhay 237, sida ay sheegtay dawladda Federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ay dhinteen inta la ogyahay siddeed qof.